40 shabakadood oo wareeg ah oo jiifa | Abuurista khadka tooska ah
Caadi ahaan markaad sameysid degel, habka nolosha oo dhan waa in lagu sameeyo iyada oo laga fekerayo duub wareegsan, laakiin adduunka ayaa ka buuxa waxyaabo ka reeban iyo bogagga leh rogrogmada jiifka ah sidoo kale waxay ku jiraan shabakadda.
Aniguna waa inaan dhahaa xaalado badan nuucaan noocan ah ayaa aad ugafiican midka taagan, inkasta oo ay tahay inaad ogaato goorta ay wax garaacayaan iyo marka kale. Ka boodka ka dib waxaad haysaa 40 tusaale oo ah goorta qormada noocan ahi u muuqato mid fiican, markaa fiiri inaad jeceshahay iyaga.
Xigasho | WDL
1 1. Sawirka Alex Flueras
3 3. Karootada Hal-abuurka ah
6 6. Dharka Qaranka 'C'N'C
9 9. Ka bixida 10 Xayeysiinta
11 11. Sawirka Eolo Perfido
15 15. Shirkii Naqshadaynta Dhamaadka
16 16. Sawirka Paolo Boccardi
17 17. Daaweynta Sawirka
18 18.Gavin Castleton
19 19. Huteel Oxford
20 20. Is-dhexgal Gacmeed / Jason Jacayl
21 21. Xasrimin
23 23. Halkan Naqshad
24 24. Koontarabaan
26 26. Polymers Lomotek
27 27. Jacaylka Bento
30 30. Studio -ga Magpie
31 31. Samee Is yeel yeel
32 32. James Stone / Farshaxan Mime
34 34. Richard Arran Sawir-qaadista
36 36. QaybtaSeven Inc.
37 37. Tyler Finck | Si tartiib ah
39 39. Dhaqdhaqaaqa jirka
40 40. Wax aan waxba tarayn
1. Sawirka Alex Flueras
Websaydhkan qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka farshaxanka ayaa leh khadad nadiif ah iyo meelo badan oo taban. Nidaamka midabka fudud wuxuu ka dhigayaa mid aad u fudud indhaha.
Isha ku hay adhiga, waxay kuu horseedaa guriga. Marka laga soo tago xaqiiqda ah in boggan uu yahay mid jiifa, waxaa ku jira animation ku-meel-gaadh ah oo ku-meel-gaadh ah oo u qalma waqtiga rarka.
3. Karootada Hal-abuurka ah
Karootada Hal-abuurka ah waxay ka kooban tahay kala-guur wanaagsan iyo kaftan aan caadi ahayn. Qaado daqiiqado yar si aad ugu sahamiso degelkan sawirrada qarsoon ee aalado iyo tilmaamo ay leeyihiin dinosaur. Hal abuur badan.
Haddii aad jeceshahay bokeh, waad jeclaan doontaa sida boggan uga dhigo mid dhinacyo badan leh. Goobtu waa mid fudud, laakiin qurux badan.
Gal kale oo farshaxan ah, markan oo leh sawirro qaabaysan iyo midab asal ah oo jilicsan. Si toos ah ayey horey ugu socotaa mana jiraan wax buuran, laakiin waxay ka dhigeysaa ujeedkeeda dadaal la'aan.
6. Dharka Qaranka 'C'N'C
Kuwa idinka ah (ahem, oo uu kujiro qoraagan) ee u maleynaya in baloogyadu aysan noqon kuwo toosan, boggan wuxuu raadinayaa inuu na cadeeyo inaan qalad nahay. Xaqiiq ahaan, qaabkani maaha mid qof walba u gaar ah, laakiin wuxuu leeyahay firfircoonaan magaalo oo kaa dhigaysa inaad rabto inaad dhex mushaaxdo.
Liis noocee ah ayaa la buuxin doonaa la'aantiis gelitaankan? Dean Oakley waa ficil ahaan isku mid ah wareejinta jiifka ah.
Xoogaa murugo leh, laakiin midkoodna ma ahan mid ku qanacsan, Dustin Curtis websaydhka qumman ayaa laga yaabaa inuu muujiyo waxoogaa ka badan intii aad waligaa dooneysay inaad ka ogaato isaga.
9. Ka bixida 10 Xayeysiinta
Kani ma aha celceliskaaga bogga wareejinta jiifka ah. Waxay kugu qaadaneysaa dhammaan noocyada tilmaamaha. Nasiib wanaag adeegsadaha, bar-tilmaameedka ayaa had iyo jeer kor saaran si dadka isticmaala ay si fudud ugu dhex wareegaan goobta.
Elfletterig waa degel Nederland ah oo qoreysa rog-rog toosan oo toosan. Sababta websaydhkani ugu guuleystey meel ka mid ah liistadan ayaa ah tag-a-dheer oo kaa celineysa inaad ku soo rogto jidkaaga oo dhan.
11. Sawirka Eolo Perfido
Sawirradu waa ku soo raaci doonaan muddo dheer ka dib markaad u gudubto degel kale. Is rogrogmada horizontal waa habka ugu habboon ee loo muujiyo sawirada cajiibka ah ee Eolo Perfido. Buug-yaraha ayaa si aamusnaan ah kaaga waramaya adiga oo maraya fikradaha kala duwan ee aadanaha.
Iyo wax jihada gebi ahaanba ka duwan, halkan waxaa ku yaal Eric Johansson websaydhkiisa oo leh boggeeda hoose ee bogga. Jecel isticmaalka muraayadaha indhaha.
Faub waa nooc ka mid ah websaydhka, oo la mid ah Exit 10 ka soo baxa maya. 9 dhibic. Maxaa Faub ka dhigaya mid aan caadi aheyn. Malaha websaydhka ugu yar ee la isticmaali karo ee liiskan ku jira, laakiin sidoo kale kan ugu badan ee aan caadiga ahayn, dadka isticmaala waa inay jiidaan bogga si ay u eegaan waxa ku jira… waxa yar ee ku jira.
Ma aha oo kaliya bogga oo dhan wuu rogaa, sidaas oo kale baarka menu. Waxay ka kooban tahay qaddar aad u tiro badan oo bannaan oo cad iyo hagitaan wax ku ool ah.
15. Shirkii Naqshadaynta Dhamaadka
Boggan waxaa ku jira mascots quruxsan iyo fallaaro geesinimo leh. In kasta oo aysan dhab ahaan ahayn naqshadda ugu hal-abuurka badan, haddana goobtu way shaqaysaa, oo waxay ka dhigaysaa in isticmaaleyaashu hore u socdaan.
16. Sawirka Paolo Boccardi
Farshaxanka ku yaal barta Paolo Boccardi waa mid la tiriyey oo sahlaya marinka. Raadinta ayaa sidoo kale leh sawir qarsoodi ah sawir kasta ka hor intaadan gujin.
17. Daaweynta Sawirka
Ma laha bar duub laakiin waa casuumaad si aad ugu jiido shaashadda bidix ama midig. Ayaa iska caabin kara dhaqdhaqaaqa jiidaya ee jilicsan Daaweynta Sawirka waxay siisaa isticmaaleyaasheeda?
Shaki kuma jiro taas. Boggan ayaa kaa dhigaya inaad fadhiisato oo aad fiiro gaar ah u yeelato. Waa kuma ninkani muxuu u jajabayaa? Si cad, su'aalahan waxay baryaan in la baaro. Astaamaha si dhakhso leh u rogrogmada. Ha ka welwelin inaad wax kudarsato intaad sugeyso bogga inuu soo raro.
19. Huteel Oxford
Huteelkani wuxuu leeyahay degel leh isbeddel wareejin siman. Jareerku ma istaago ama wuu bilaabmaa. Qurxoon oo nadiif ah.
20. Is-dhexgal Gacmeed / Jason Jacayl
Naqshaddani waxay ku siinaysaa ikhtiyaarka aad bidix ama midig ugu tagto bilowga. Xagee u kacdaa horta? Wixii cusub ee jiifa, naqshadeeye Jason Love wuxuu si cad u qeexayaa sida loogu isticmaalo goobta fallaarta xariifka ah ee gacanta lagu sawiro.
Hasrimy si yaab leh u culus-culus, Hasrimy wuxuu xirxiraa feer badan oo loogu talagalay nooc sifudud u ah oo sida caadiga ah ku jira waxyaabo kooban.
Websaydh Faransiis ah oo leh bar marin habeysan oo caqli-gal ah oo kugu raacaya meel kasta oo aad uga safarto goobta.
23. Halkan Naqshad
Halkan Naqshadeynta ayaa qoreysa gaabis laakiin aad u siman oo udhaxeeya sawirada. Maaha oo kaliya inaad ku dhex wareegi karto fallaaraha, laakiin sidoo kale waxaad dooran kartaa lambarro.
Kontrabandku waa curis sawir leh sawirro yaab leh iyo duub caqli badan oo ka buuxa sanduuqa macluumaadka. Isticmaaluhu wuxuu ku wareejin karaa xawaare u gaar ah ama wuxuu dooran karaa duubista otomaatiga.
Boggan Ruushku wuxuu ka kooban yahay hagitaan waalli ah oo aan runtii ahayn mid saaxiibtinimo leh, laakiin habka hal-abuurka ah ee loo qaabeeyo waxay ka buuxineysaa dhammaan martida baqdin iyo yaab iyo xiiso.
26. Polymers Lomotek
Lomotek wuxuu leeyahay hagitaan xasilloon oo mararka qaarkood ka hor taga waxyaabaha la doonayo, si kastaba ha noqotee had iyo jeer waa wax fiican in la helo menu marin hagitaan ah.
27. Jacaylka Bento
Boggan wuxuu leeyahay qorshe naqshad leh oo xiiso leh oo leh midabyo midabbo leh. Fikrad xiiso leh oo loogu talagalay bogga inta badan la cusbooneysiiyo.
Midabada ku taal Lucuma waa kuwo dhalaalaya. Raadinta ayaa ka baxsan adduunkan. Waxaad isku arki doontaa inaad gadaal iyo gadaal u rogrogmaysid si aad mar labaad u aragto kala-guurka.
Haddii aadan ku jirin kalluunka dahabiga ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad ka fogaato degelkan soo socda ee uu qoray Luke Larsen. Websaydhkani waa ku culus yahay kalluunka dahabiga ah laakiin sidoo kale wuxuu u culus yahay duubka. Hubso inaad si qumman u rogto si aad u aqriso dhammaan macluumaadka boggiisa, iyo inaad aragto kalluun badan oo dahab ah.
30. Studio -ga Magpie
Xarafka maalinta waa "M." Ayaa ogaa inay jiraan noocyo badan oo Ms ah oo adduunka ku nool? Marka laga reebo Ms, hubi inaad fiiriso Mashruucyada la Xullay waxoogaa ficil ah oo dhab ah.
31. Samee Is yeel yeel
Boggan waxaa loogu talagalay qof kasta oo aan qaadan karin tilmaam. Xaaladaha aan la hubin awgood, adeegsadayaasha booqda Sameeya Iska yeel inay garaan midig. Nasiib darrose, maqnaanshaha baarar duudduuban oo muuqda ayaa laga yaabaa inuu ku dhufo dad yar.
32. James Stone / Farshaxan Mime
Boggan quruxda badan, mugdiga ah ayaa wax ku dhufanaya iyada oo aan aad ugu tiirsaneyn sawirada. Navigation waxaa lagu sameeyaa adigoo gujinaya walxaha ku yaal liiska. Halkan buug isuguma duuduuban. Waxyaabo badan laakiin, mararka qaarkood, ay adag tahay in la akhriyo.
Tilmaamuhu waa kuwo qurux badan, waana lagama maarmaan markii la soo bandhigayo macluumaadka iyada oo loo marayo bogga wareegga jiifka ah. Peter Pearson ayaa helay, wuxuuna u sharaxay dadka isticmaala inay u baahan yihiin inay u dhaqaaqaan dhanka midig. Caqli badan oo anshax leh.
34. Richard Arran Sawir-qaadista
Goobtani waxay qabataa shaqo wanaagsan oo lagu soo gudbiyo dareenka muuqaalka farshaxanka. Sawirada si fudud ayaa loo gujin karaa si loo xiro.
Ricky Cox wuxuu leeyahay dhowr daaqado siibiq ah oo kuyaal hal bog oo toos ah. Kani waa iskudhaf dhif ah oo la arko, oo halkan ayuu ku shaqeeyaa sababtoo ah wareejinta buuggan ee fudud iyo qaab xariifnimo leh.
36. QaybtaSeven Inc.
Dul jiirkaaga qeybta bidix ama midig ee shaashadaada oo fiiri koodhku inuu qabanayo shaqada oo dhan. Midabbada quruxda badan, kala-guurka fudud iyo qaybaha bilaa ekaanta ah ayaa ka dhigaya degelkan farxad lagu dhex wareego.
37. Tyler Finck | Si tartiib ah
Kala-guurka Hoyga ayaa gabi ahaanba la yaab leh. Waxay mudan tahay in la hubiyo kaliya in la arko kala guurka cajiibka ah.
Artsy, xiiso leh, oo si fiican loo qabtay. Boggan waxaa ku yaal bar-guuritaan guuritaan guur ah oo ah fikrad la yaab leh oo ka dhigaysa goob kasta oo jiifta isla markaaba adeegsade saaxiibtinimo.
39. Dhaqdhaqaaqa jirka
Ma ka daashay gujintu? Tinkainteractive wuxuu ku siinayaa awood aad ugu duljoogsato inaad rogrogto, adiga oo fartaada tilmaanta siinaya nasasho aad loogu baahnaa. Nidaam midab aad u fiican.
40. Wax aan waxba tarayn
Vanity Claire waxaa kujira iftiiminta isbadal deg deg ah, midabyo geesinimo leh iyo meelo badan oo taban si loo fududeeyo kala guurka. Ma jiro bar duudduuban, laakiin baarka menu-ka aadka u muuqda wuxuu kuu oggolaanayaa inaad dib u laabato, horay u socoto ama aad gurigaaga ku laabato. Waa maxay goob qurux badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » 40 bogag isweydaarsi siman ah